Mba kacha oyi na mbara ala | Netwọk Mgbasa Ozi
Sergio Gallego | | Meteorology, Ebili mmiri oyi
N'oge ndị a, Spain nhụjuanya mbụ oke ife oyi nke afọ nwere oke okpomọkụ, ọkachasị n'ebe ugwu nke peninshula. Agbanyeghị, ọnọdụ okpomọkụ a enweghị ihe jikọrọ ya na ndị ahụ ruru ná mba ndị ọzọ n’oge oge oyi.
Ọzọ m ga-egosi gị ndị ha bụ mba kachasị oyi na mbara ala na nke ị na-agaghị achọ ibi oge oyi.
Ọ bụ otu n'ime ebe oyi kachasi n'ụwa ọ bụkwa na Antarctica ka ha ruru Ogo 89 n'okpuru efu. Mma nke okirikiri ala na-eme ha ọtụtụ ndị njem na-ezukọta n'ime afọ na-ata ahụhụ ya mere obere okpomọkụ.
Northern Canada Ọ bụ otu n'ime ebe kachasị oyi na mbara ala ebe ọ bụ na enwere ike iru ya Ogo 40 n'okpuru efu. Ọnọdụ ala nke mpaghara a ọ bụ n'ezie ikpọ ebe o nwere ọtụtụ puku osisi fir na-ada tinyere nnukwute ugwu nke na-eme otu ihe ahụ ezigbo postka ekeresimesi.
Finland bụ ezigbo ihe Northern Europe na snow bụ ugbu a niile ogologo oyi. Okpomọkụ nwere ike ịnweta na ogo 45 n'okpuru efu n'akụkụ ụfọdụ nke mba ahụ na oge anwụ na-acha kwa ụbọchị fọrọ nke nta ka ọ ghara ịdị. Otu n'ime ebe kachasị agakarị ma kwadoro maka ndị njem ọ bụla Lapland na-ajụ oyi ma na-ajụkarị oyi obodo ebe Santa Claus bi.
Iceland bụ mba ọzọ na Europe ebe winters bụ n'ezie ọjọọ. Okpomọkụ na-adịkarị gburugburu Ogo 25 n'okpuru efu niile oyi ogologo, ya mere ndụ a na obodo ọ dị mgbagwoju anya. Dịka ihe na-egbochi oke oyi, Iceland nwere na oke ala mara mma ndị ahụ kwesịrị ileta ma tụlee ma ọ dịkarịa ala Otu ugboro na ndụ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Netwọk Mgbasa Ozi » Ihe gbasara ihu igwe » Ebili mmiri oyi » Mba ndị kacha oyi na mbara ala